Sentinelle (2021) | MM Movie Store
ဒီတဈခါတော့ အမြိုးသမီး ဂြှနျဝဈချ အကွောငျးပေါ့ဗြာ။မငျးသမီးကတော့ 007 Quantum of Solace, Hitman, Johnny English3စတဲ့အမိုကျစားကားတှမှောပါခဲ့ဖူးတဲ့ ပွငျသဈမငျးသမီး Olga Kurylenko က အဓိကဇာတျကောငျအဖွဈ ပါဝငျထားတဲ့ကားဖွဈပါတယျ။ဇာတျလမျးအကဉျြးကတော့ ဒီလိုပါ။
ကလယျရာ ဟာ ကငျးစောငျ့စဈဆငျရေးမှာ တာဝနျကတြဲ့ အထူးတပျသားတဈယောကျဖွဈပါတယျ။နိုငျငံရပျခွားကစဈဆငျရေးမှာ အဖွဈဆိုးကွီးတဈခုကွောငျ့စိတျဒဏျရာရခဲ့ပွီးအမနေဲ့ညီမ ရှိတဲ့ မိမိနထေိုငျရာပွငျသဈကို ရှပွေ့ောငျးခံခဲ့ရပါတယျ။
ညီမဖွဈသူ တာနီယာနဲ့အတူ ကလပျတကျခဲ့ပွီးနောကျတဈနမှေ့ာ တာနီယာဟာအဓမ်မပွုကငျြ့ခံခဲ့ရတာကို စိတျပကျြဝမျးနညျးစှာသိလိုကျရပါတယျ။နိုကျကလပျရဲ့လုံခွုံရေးဗီဒီယိုကတဈဆငျ့
ထိုအမြိုးသားရဲ့ဖခငျဟာ အရှိနျအဝါကွီးတဲ့ နညျးပညာရှငျတဈယောကျဖွဈနလေို့ဥပဒရေစုံစမျးစဈဆေးဖို့အခကျတှနေ့တေဲ့အခါကလယျရာဟာ ဥပဒဘေောငျကထှကျပွီး လကျစားခဖြေို့ အမြိုးသမီးဂြှနျဝဈချ လုပျဖို့ဆုံးဖွတျလိုကျပါတော့တယျ။
အရငျခတျေတုနျးက ဂကျြမ လို့ ချေါတဲ့ အမြိုးသမီး အကျရှငျကားကောငျး ကွိုကျနှဈသကျသူမြား အကွိုကျတှကွေ့ဦးမှာပါ။မငျးသမီးတှရေဲ့ ရှိုကျဖိုကွီးငယျ အသှယျသှယျရဲ့အလှတရားကို ခံစားရမယျ့ အခနျးတှလေညျး ပါဦးမှာဆိုတော့ကာ …..ဘာမြားစောငျ့နဦေးမလဲ …. ပရိသတျကွီးရယျ
ဒီတစ်ခါတော့ အမျိုးသမီး ဂျွန်ဝစ်ခ် အကြောင်းပေါ့ဗျာ။မင်းသမီးကတော့ 007 Quantum of Solace, Hitman, Johnny English3စတဲ့အမိုက်စားကားတွေမှာပါခဲ့ဖူးတဲ့ ပြင်သစ်မင်းသမီး Olga Kurylenko က အဓိကဇာတ်ကောင်အဖြစ် ပါဝင်ထားတဲ့ကားဖြစ်ပါတယ်။ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းကတော့ ဒီလိုပါ။
ကလယ်ရာ ဟာ ကင်းစောင့်စစ်ဆင်ရေးမှာ တာဝန်ကျတဲ့ အထူးတပ်သားတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံရပ်ခြားကစစ်ဆင်ရေးမှာ အဖြစ်ဆိုးကြီးတစ်ခုကြောင့်စိတ်ဒဏ်ရာရခဲ့ပြီးအမေနဲ့ညီမ ရှိတဲ့ မိမိနေထိုင်ရာပြင်သစ်ကို ရွှေ့ပြောင်းခံခဲ့ရပါတယ်။
ညီမဖြစ်သူ တာနီယာနဲ့အတူ ကလပ်တက်ခဲ့ပြီးနောက်တစ်နေ့မှာ တာနီယာဟာအဓမ္မပြုကျင့်ခံခဲ့ရတာကို စိတ်ပျက်ဝမ်းနည်းစွာသိလိုက်ရပါတယ်။နိုက်ကလပ်ရဲ့လုံခြုံရေးဗီဒီယိုကတစ်ဆင့်
ထိုအမျိုးသားရဲ့ဖခင်ဟာ အရှိန်အဝါကြီးတဲ့ နည်းပညာရှင်တစ်ယောက်ဖြစ်နေလို့ဥပဒေရစုံစမ်းစစ်ဆေးဖို့အခက်တွေ့နေတဲ့အခါကလယ်ရာဟာ ဥပဒေဘောင်ကထွက်ပြီး လက်စားချေဖို့ အမျိုးသမီးဂျွန်ဝစ်ခ် လုပ်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတော့တယ်။
အရင်ခေတ်တုန်းက ဂျက်မ လို့ ခေါ်တဲ့ အမျိုးသမီး အက်ရှင်ကားကောင်း ကြိုက်နှစ်သက်သူများ အကြိုက်တွေ့ကြဦးမှာပါ။မင်းသမီးတွေရဲ့ ရှိုက်ဖိုကြီးငယ် အသွယ်သွယ်ရဲ့အလှတရားကို ခံစားရမယ့် အခန်းတွေလည်း ပါဦးမှာဆိုတော့ကာ …..ဘာများစောင့်နေဦးမလဲ …. ပရိသတ်ကြီးရယ်